Mockuuups Studio: chirongwa chinonakidza chekugadzira mockups | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Multimedia, Resources, Linux software
Mazuva mashoma apfuura, uye netsaona, Ndakawana chirongwa chinonzi Mockuuups Studio. Iwe unogona kushandisa chirongwa ichi mahara, uine akati wandei nziyo dzemahara, kunyangwe iwe uchigona zvakare kubhadhara kuti uve nechimwe chinhu chakazara kupfuura icho chinowanikwa nechigadziko. Izvo zvataurwa, ndinofanira kutaura kuti iwe unogona kuiisa kubva kuUbuntu Software Center, kana kuiwana mune imwe chitoro cheapp.
Kana iwe usingakwanise kuiwana mune yako distro unogona kuikanda kubva yayo yepamutemo webhusaiti. Pa peji rino iwe uchawana mapakeji anodikanwa kuti uiise paGNU / Linux, asi inowanikwawo paWindows uye ye macOS. Muchiitiko chepakeji yeLinux, iri yepasirese Snap package, saka unogona kuiisa zviri nyore. Pasinei neplatifomu yauri kuishandisa, uye kuti unoiisa sei, ikozvino ini ndichakuudza kuti nei yanga ichinakidza kwandiri ...
1 Chii chinonzi mockup?
2 About Mockuuups Studio
Chii chinonzi mockup?
Kana iwe uri kushamisika chii chinonzi mockup, kana kuseka-kumusoro, kana modhi, dhizaini kana chiyero kana saizi-yehupenyu modhi yechigadzirwa chinoshandiswa pakuratidzira, kuratidzira, kuongorora, kukwidziridzwa, uye nezvimwe zvimwe zvinangwa. Aya marudzi ekunyorwa akanaka kwazvo uye zvirokwazvo wakazviona munzvimbo zhinji pamambure. Zvakanaka, ikozvino unoziva kuti ungavasika sei neMockuuups Studio mune yakapusa nzira ...
Vazhinji vagadziri vanoshandisa aya marudzi enziyo, uye kuti iwe ugone ona mamwe madhemoni, Ndakagadzira mimwe mienzaniso yekuti iwe uone. Ini ndatora iyo LxA peji uye ndorishandisa senge kumashure kweMockuuups Studio. Ipapo ini ndasarudza mamwe emahara magadzirirwo kuti iwe ugone kuona mhedzisiro ... Ndinovimba unofarira mhedzisiro uye woiwana ichishanda kune ako zvibodzwa!
About Mockuuups Studio
Zvinosuruvarisa Vadivelu Comedy Mockups Studio Iyo ndeyako software, uye sezvandambotaura, ine zvimwe zvausingakwanise pane zvaunogona kuita kana ukasabhadhara. Asi pamabasa mazhinji akareruka inogona kuve irubatsiro rukuru runoita kuti nziyo dzive nekukurumidza uye nyore. Pasina kushandisa mamwe mapurogiramu akaomarara uye uzviite nenzira iri nyore.
NaMockuuups Studio iwe unogona gadzira zvigadzirwa mockups mune imwe nyaya yemasekondi. Izvo zvakanaka kune ako mabloggi, ako mharidzo, kana kune chero basa kwaunoda kuratidza chimwe chinhu chineruzivo. Pakati payo rondedzero yezvigadzirwa zviripo akasiyana akasiyana, senge maDell makomputa, akasiyana mafoni, iPad, iPhone, Samsung zvigadzirwa, uye yakareba etc. Haasi ese anowanikwa pasina kubhadhara.
Pane yayo huru skrini iwe unogona kusarudza iyo yaunoda kwazvo, tinya pairi uyezve iyo inokutendera iwe kuendesa Wallpaper, logo kana chero mufananidzo. Ipapo chirongwa chaicho chichava mutariri wekuchiisa kumashure pachiratidziro chechigadzirwa chawasarudza. Zvakareruka sekudaro. Kana iwe uchida mhedzisiro, unogona kurodha mhedzisiro se .png kana .jpg mufananidzo wekushandisa mune rako basa.
Zviratidzo zvekutanga zvinoratidzwa nekukurumidza, haitore chero chinhu kuigadzira uye haitore kurodha mhedzisiro yaunoda. Uye zvakare, iwe unogona kuenda kuburikidza nemasiraidhi kuti uone kuti mhedzisiro yacho ingave sei pane mamwe anowanikwa zvishandiso, pasina kuendesa mufananidzo pane imwe neimwe yadzo.
La raibhurari yemidziyo ine mifananidzo inosvika mazana mashanu emhando yepamusoro uye kubva pamakona akasiyana siyana nemidziyo. Ndokusaka iwe usinga fanirwe kutsvaga Google kune ako maumbirwo. Uye zvakare, inogona kuwedzerwa kana iwe uchida. Ehe zvese zvakarongeka zvakanaka, ine injini yekutsvaga uye mafirita ekuratidza chete zvaunoda nguva dzese.
Chekupedzisira, iwe unofanirwa kuziva kuti chii inowirirana neFigma mafaera uye zvakare Photoshop, kana iwe uchida kushandisa iyi faira yefaira mune zvako zvinyorwa. Uye zvechokwadi, inogamuchira JPEG uye PNG mhando mifananidzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Mockuuups Studio: chirongwa chinonakidza chekugadzira mockups
REFInd, imwe nzira yakanakisa kune yakanyanya kugadziriswa Grub